लोकामान दोषी हुन् (सन्दर्भ लोकमान) | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » लोकामान दोषी हुन् (सन्दर्भ लोकमान)
लोकामान दोषी हुन् (सन्दर्भ लोकमान)
नेपालका सत्ताधारी लोक कल्याणको निमित्त होइन, स्वार्थसिध्दि र स्वकल्याणको लागि राज्यका सबै अंगहरुको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
सँगै, यहाँका स्वघोषित सिध्दान्तकारहरु र सत्ताधारी समूहहरुद्वारा नै पोषित मेडियास‌जाल यस्ता प्रयोगहरुलाई महिमामण्डित गरिरहने परम्परा पनि रहिआएको छ ।
अहिले यस्तै एउटा कुरामा महाभारत जित्ने भ्रम छर्दै लोकमानको सन्दर्भ आगाडि सारिएको छ ।
लोकमानले केही भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारबाही पनि गरे, तर धेरै इमानदार र निर्दोषहरुलाई अख्तियारको चाबुकले बदनीयतपूर्वक प्रताडित गर्ने कार्य पनि गरे । कतिपय भ्रषटाचारीहरुले सजाय पनि पाएका छन् भने कुनै भुक्तानी नलिएका वा भुक्तानी दिन आदेश पनि नदिएका कतिपय राष्ट्सेवकहरु नैतिक भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपमा अकारण पदमुक्त, अपमानित तथा कलंकित भएर सामान्य धरौटीमा विशेष अदालतमा तारेख कुरिरहेका छन् ।
यस्ता प्रताडनको एक मात्र उद्देश्य आफ्ना राजनैतिक आकाहरुलाई खुशी पार्नु, अख्तियारको चाबुकलाई तिखार्नु, असिमित तर अदृश्य लाभ कमाउनु र अख्तियारले दिएको अख्तियारको दुरुपयोगलाई लुकाउन वातावरण आतंकित गर्नु नै रहेको देखिन्छ ।
यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर कसैको मुख फुटिरहेको थिएन । किनभने सत्ताधारीहरु भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेका थिए । बोल्दा आफ्नै सुरक्षामा सेंघ लाग्थ्यो । तर अहिले उफ्रिरहेका छन् । उष्णताले बिलबिलाएका सर्पहरू झैं फन मारी फोंफों गरिरहेका छन् ।
यसको कारण आँखा चिम्ल्याईको समर्थनले प्राप्त सुरक्षा कवचमा प्वाल हुनु हो ।
कारबाही हुनै थालेको निश्चितता बढेपछि लोकमानको पत्तासाफको शकुनी बुध्दि बाहेक अन्य कुनै बाटो नदेखिएर यस्तो भएको हो ।
लोकमान अपराधी हो । सबैलाई थाहा छ । तर त्यतिले दण्डको कारबाही पूरा हुन सक्दैन । लोकमानले कहाँ कहाँ विधि कानूनको उल्लंघन गरे
अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको काम र कर्तव्यप्रति कहाँ कहाँ जानाजान च्युत भए ? यसका शिकार को को भए ? स्पष्टताका साथ सूचीवध्द भएर सप्रमाण जनताको समक्ष आउनु आवश्यक छ । अकारण उनका शिकार हुन पुगेकालाई अन्याय, प्रताडनको अनाहक भोग, अपमान र कलंकबाट निकाल्न संसदले के व्यवस्था गर्ने ?
या उनीप्रति राज्यको तर्फबाट माफी मांग्ने भन्ने पनि प्रष्टताका साथ आउनु पर्दछ ।
होइन भने हामीलाई टेरेन, भनेको मानेन, अख्तियारको लौरो देखायो भनेर महाअभियोगको कारबाहीको अर्थ अर्को कदाचार हुनेछ ।
लोकमानपछि अख्तियारले निष्पक्षता तर कडाईका साथ कार्य गरिरहने तर, अख्तियारकै प्रमुख वा अन्य आयुक्तहरुले आ(आफनो अख्तियारको दुरुपयोग गर्न नसक्ने र गरे सजायको भागी हुने विधिको व्यवस्था गरेर संसदले आफ्नो असल नियतको विश्वास पनि जनता दिलाउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
होइन भने, सत्ताधारीहरुले आफ्नो भ्रष्टाचारमाथिको कारबाही रोक्न सदाको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको निकायको तेजोबध गरेको मात्र ठहर्नेछ ।
यसका निमित्त लोकमानले कुन(कुन भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्न थालेका थिए सो को आधिकारिक विवरण र ती फाइलहरुको समुचित जाँचको सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ ।
लोकमानमाथि महाअभियोगको प्रकरणलाई संविधान संशोधनसंग जोड्ने कुप्रयास भइरहेको छ । महाअभियोग संवैधानिक शक्तिको दुरुपयोगको दण्डसंग जोडिएको प्रकरण हो ।
संविधानको संशोधन भनेको अस्वीकार्य जनबिरोधी संविधानको रुप फेरेर कामचलाऊ स्वीकार्यता निर्माण गर्ने ऊद्देशयसंग जोडिएको विषय हो । देशको जनताको आकांक्षाको सम्वोधनसंग सम्बन्धित छ ।
लोकमानमाथि महाअभियोगको प्रकरणलाई संविधान संशोधनसंग जोड्ने कुप्रयास लोभी, पापी, स्वार्थी मनको लुकेको डरलाई उदाङ्ग गर्दछ १
१. आरोप सप्रमाण सूचीवध्द गर । उनको कार्यले राज्य र निर्दोषलाई भएको नोक्सानको क्षतिपूर्तिको रोडम्याप देखाऊ
२. पछि यस्तै हुने अथवा आयुक्तहरु राजनैतिक दलहरुसंग डराएर आयोग नै निष्प्रभावी हुने अवस्था नआओस् – त्यसको लागि प्रभावी विधिको व्यवस्था गर
३. आयोगमा कारबाहीको लागि तयार राजनैतिक दलका नेताहरुको भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित फाइलहरुमाथि कारबाही गरिने सुनिश्चितता गर